Global Voices teny Malagasy » Tofoka Amin’Ilay ‘Fomba Fisainana: Isika VS Izy Ireo’— Samy Trinidadiana Daholo Isika · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 17 Jolay 2015 17:45 GMT 1	 · Mpanoratra Janine Mendes-Franco Nandika Tantely
Sokajy: Karaiba, Trinite sy Tobago, Fanabeazana, Fifindràmonina, Foko sy Fiaviana, Hafanàm-po nomerika, Lalàna, Mediam-bahoaka, Sakafo, Tanora
Mahasarika fijery maro ny antsojay ety amin'ny Aterineto ataon'ny olom-pirenena ao Trinite sy Tobago amin'ireo taranaka Shinoa nandritra ny nisian'ny onjanà fitsaratsaram-poana farany indrindra teo noho ny fihaviana  natao azy ireo. Nirehitra ny tsy fitiavana Shinoa naterak'ilay lahatsarinà mpivady iray — izay nolazaina fa tao aminà toeram-pisakafoana Shinoa iray — manala hoditra alika. Lasa nalaza be tamin'ny media sosialy io ary vao mainka nihombo vokatr'ireo fanehoankevitra nampihitatra ny fery nataon'ny ministeran'ny fahasalaman'ny firenena.
Nanintona an'ilay mpitoraka bilaogy Rhoda Bharath ny fahasahiany sy ny fivantanany miteny, ka nanao tafatafa tamin'i Kwok izy momba ny fiainany hatrizay ny maha-Shinoa miaina any Trinite sy Tobago azy. Nampiditra ilay lahatsoratra tamin'ny famintinana i Bharath hoe “manana ray aman-dreny Shinoa, fomba fisainana mahafinaritra ary fanahy torotoro i Kwok. Mahatsapa ho zara raha misy mpisolo tena izy, tsy misy mampahery ary trotraka”. Ny tena zava-misy, tsy voalohany tamin'ny zavatra nampirohotra ny fihetseham-po tsy tia Shinoa ilay tranga famotsirana alika iny. Nampahatsiahy  i Kwok:
Telo taona lasa izay, tamin'ny fotoanan'ny tsingerintaona faha-50 ny fahaleovantenan'i Trinite sy Tobago tamin'ny Grande Bretagne, nandefa tetikasa an-tsary  tamin'ny Aterineto i Joshua Lue Chee Kong, izay nampiseho ny halalin'ny fomba fijery ara-piaviana ao Trinite sy Tobago. Nozarainy ho “ampahany” efatra ilay tetikasa — Volontany, Fotsy, Mavo ary Mainty — ary napetraka, ho toy ny olona Shinoa, tamin'ireo karazana zava-naseho miaro fitsaratsaràm-poana izay nahatonga ireo hivandravandra tonga dia hita, na tsy ho asian-teny aza, hoe tsy misy fotony mihitsy ireny fomba fisainana ireny. Ireo Ampahany Volontany dia filalaovana ny tantaran'ny mpiasa Indiana izay tonga tao Trinite sy Tobago mba hiasa ao amin'ny tanim-pary taorian'ny Famotsorana:
Mahagaga fa misy elanelany taona maro ireto lahatsoratra roa ireto; mety nanao fanehoankevitra tamin'ireo sarin'i Joshua Lue Chee Kong i Lily Kwok raha nilaza  hoe:
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2015/07/17/72145/
 nandritra ny nisian'ny onjanà fitsaratsaram-poana farany indrindra teo noho ny fihaviana: https://globalvoicesonline.org/2015/07/16/trinidad-tobagos-chinese-community-is-dog-tired-of-racial-stereotyping/
 nanao tafatafa : http://rhoda-bharath-jxtv.squarespace.com/the-eternal-pantomime/2015/7/16/dog-eat-dog
 tetikasa an-tsary: https://www.behance.net/gallery/4976731/IDENTITY-In-Post-Independent-Trinidad-Tobago